အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်စာတန်ကိုအနိုင်ယူပါ | Fasting to Overcome Satan | Real Conversion
၂၀၁၂၊ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လ၂၆ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊
သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြား သောဒေသနာတော်၊
]]အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှ တပည့်တော်တို့က၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနတ်ကိုအဘယ် ကြောင့်၊မနှင့်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟု တိတ်ဆိတ်စွာ မေးလျှောက်ကြသော်၊ ကိုယ် တော်က၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး အဘယ်သို့သောအားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည်မထွက်နိုင်ဟု မိန့်တော်မူ၏} }(မာကု ၉း၂၈ç၂၉)။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ “နောက်ကာလ၌ ဩတ္တပ္ပစိတ်တွင် သံပူခတ်ခြင်းကို ခံပြီးလျှင်၊ မုသာစကားကို ပြောတတ်သောသူတို့၏ ဟန်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် လူအချို့တို့ သည် ယုံကြည်ခြင်းကို စွန့်ပယ်၍ လှည့်ဖြားတတ်သော ဝိညာဉ်တို့၌၎င်း၊ နတ်ဘုရားတို့ နှင့် စပ်ဆိုင်သော ဩဝါဒတို့၌၎င်း၊မှီဝဲဆည်းကပ်ကြလိမ့်မည်” (၁တိ၄း၁)။ ကမ္ဘာကြီးအ ဆုံးနေ့ရက်ကာလမတိုင်ခင် “နောက်ဆုံးသောကာလ”၌ နတ်ဘုရားတို့၏ ဩဝါဒသည် ကြီးထွားလာမည်ဟု ၎င်းကျမ်းပိုဒ်က ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မာန်နတ်သည် သူ၏ နတ်ဆိုးအပေါင်းအပါတို့အား အင်အားကြီးထွားစေလျှက်၊ ပြင်းထန်စွာ အသင်းတော်များကို တိုက်ခိုက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထူးဆန်းသော နမိတ်လက္ခဏာတခု ချင်းစီက၊ ယနေ့တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ် သည်ကို ထောက်ပြနေပါသည်။ အနောက်တိုင်း၌ရှိ အသင်းတော်များတို့သည် နတ်ဘုရားတို့၏ ဩဝါဒများအကြောင်းတွေးတော ဆင်ခြင်ခြင်းမရှိကြသေးပါ။ ဒါးလားစ်သီဩလော်ဂျီကျမ်းစာကျောင်းမှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမီးရီလ်းအက်ဖ်အန်ဂါ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်၊ အသင်းတော်များတို့သည် မာန်နတ်နှင့် အပေါင်းအပါများ ပြင်းထန်စွာ ယုံကြည်သူများကို ဖြားယောင်းသွေးဆောင်နေသည်ကို လက်ခံရန်ငြင်းဆန်ကြပါသည်။ ယုံကြည်လက်ခံခြင်း၊ မရှိသောသူတို့၏ အခြေအနေ သည်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ကျဆင်းနေသည်ကို ယနေ့ အသင်းတော်များ၌ တွေ့နေရ ပါသည်။” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ ထို့နောက်၊ ဒေါက်တာအန်ဂါ၊၊ ဆက်လက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့သော သူတို့သည် စာတန်မာန်နတ်နှင့် သူ၏ပရိယာယ်ကို လှစ်လျူးထားသောကြောင့် ဝမ်းနည်းဖွယ်၊ အဖြစ်အပျက်နှင့် တွေ့ကြုံကြရပါသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်ပြည့်၀သော ယုံကြည်သူတို့ပင်လျှင် ဝိညာဉ်ဆိုး တို့၏ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံနေရကြသည်။” ထိုသူက ဆက်လက်၍ ယနေ့ခေတ် ဓမ္မအမှုဆောင်တို့သည် “လောကီမှောင်မိုက်အစိုးတရ ပြုသောမင်း၊ မိုးကောင်းကင်၌ နေသောနတ်ဆိုးတို့က ထိုသူတို့၏ ဝိညာဉ်မျက်စိကိုကွယ်စေပြီဖြစ်သည်” (Merrill F. Unger, Th.D., Ph.D., Biblical Demonology, Kregel Publications, 1994 edition, p. 201).
ဒေါက်တာအန်ဂါသည် စိတ်ဝင်းစားထိုက်သူတော့မဟုတ်ပေ။ သူသည် ဒါးလားစ် ဓမ္မတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါသည်။ ဏ့.D ဘွဲ့ကိုမူ ဂျွန်ဟုတ်ကိန်း တက္ကသိုလ်မှ အပ်နှင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်။ ဒေါက်တာဝီလ်ဘာအမ်စမစ်၊ ပြောကြား ချက်ကို ကျွန်ုပ်ကိုးကား ဖေါ်ပြလိုသည်မှာ၊ “သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဖေါ်ပြပါ၊ ဝိညာဉ်ဆိုးများသည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကစ၍ နောင်ကာလအဆက်ဆက်၊ ရှိနေအုံးမည်ဖြစ်သည်” (jacket statement). ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာစမစ်သည် ၂၀ရာစုခေတ်၌ထင်ပေါ် ကျော်ကြားသော ဓမ္မသင်ကြားရေး ဆရာတပါးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာအန်ဂါသည် ယုံကြည်ကိုးစားထိုက်သူတဦးဟု ထိုသူသည် အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံထားပါသည်။
ထိုသို့သော ဒေါက်တာအန်ဂါ၏အတွေးအမြင် မှန်ကန်ပါသလား? ဒီကနေ့အမှု တော်ဆောင်များသည် စာတန်မာန်နတ်၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းကို ခံနေရကြသည်။ အကြောင်းမှာ မာန်နတ်နှင့်သူ့၏ ပရိယာယ်ကို လှစ်လှူရှုသောကြောင့်လော့”? “မာန် နတ်၏ပစ်ခက်သော မီးစက်လက်နက်ကိုကာ သတ်ဖို့မတတ်နိုင်ကြရခြင်းသည် မာန်နတ် နှင့်ပါတ်သက်သော အသိပညာဗဟုသုတကင်းမဲ့ကြသောကြောင့်လော့? အမှန်စင်စစ် ထိုသို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်! ၂၅နှစ်ဝန်းကျင်လူငယ်၈၅%အသင်းတော်၌ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်နေကြရသည်ကို လူတိုင်းအသိပင်ဖြစ်သည်! လူငယ်များအသစ်သော အသက်တာ ၌ပြောင်းလဲနိုင်ရန် ယနေ့အသင်းတော်များ မတတ်နိုင်ကြဘဲ၊ အားနည်းဆုတ်ယုတ်နေကို အသင်းတော်များ အသိပင်ဖြစ်ပါသည်! ထိုကဲ့သို့ ဆုတ်ယုတ်ကြရခြင်းကား စာတန်မာန် နတ်နှင့်ပရိယာယ်ကို လှစ်လှူရှုထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါက်တာ တေမောသေလင်းသည် ၂၃နှစ်တိုင်၊ ကျွန်ုပ်၏ သင်းအုပ်ဆရာ တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူနှင့်ကျွန်ုပ်မတွေ့ခင်၊ ထိုသူသည် ဘတ်ဂျုံးတက္ကသိုလ်၌ ဓမ္မပညာသင်ကြား ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ နောင်တွင် ထိုသူသည် အီလီနွုက်စ်၊ ဒီးရ်ဖီးလ်၌ရှိ၊ တာဘောတ် ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းနှင့် ထရီနီတီဧဝံဂေလိ ကယ်ဒီဗီနီတီ၌ ဓမ္မပါမောက္ခ တဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာလင်းသည် ထိုင်ဝမ်၌ တရုတ် ဧဝံဂေလိကယ် ဓမ္မတက္ကသိုလ်၏ ဥက္ကဌတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ဒေါက်တာဂျင်းဟုတ် ဆန်တေလာနောက် တတိယမြောက် ဥက္ကဌတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာလင်းက “သင်းအုပ်ဆရာများ ဧဝံဂေလိ ဆရာများနှင့် ဓမ္မတက္ကသိုလ် ပါရဂူတို့ သည် စာတန်၏ ကျော့ကွင်းထဲ ကျရောက်ခဲ့ကြ သည်။ ထို့ကြောင့် နံနက်ခင်းအိပ်ရာ နိုးထချိန်တွင် ဆုတောင်းခြင်း အလေ့အထမရှိခဲ့ ကြပါ! ထိုသို့သော အခြေအနေတရပ်ကို၊ သခင်ရူအးကလာဖို့ နီးလေလေ တွေ့ရလေလေဖြစ် နေသည်။ စာတန်မာန်နတ်၏ ထိန်းချုပ်နေခြင်းကို သတိမရှိသောသူတို့သည် ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်းဝေဒနာ ကို ခံစားကြရ၏” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992 edition, p. 96).
ဒေါက်တာလင်းပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ယနေ့အသင်းတော်သည် ဘုန်းတန်ခိုး မှေးမှိန်ကြရပြီး အားနည်းလျှက်ရှိရခြင်းကား “စာတန်မာန်နတ်၏ထိန်းချုပ်မှုကို မသိ၍ ဖြစ်သည်” ထိုသို့အားဖြင့် အသင်းတော်သည် “ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်း၊ သနားဖွယ်ဖြစ် ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ မျက်စိကန်းခြင်းနှင့် အဝတ်အချည်း၊ စည်းရှိခြင်းဖြစ်သည်ကို မသိပါ တကား” (ဗျာဒိတ်၃း၁၇)ဟူ၍ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ပင်၊ ရှင်မာကု ၉း၂၈-၂၉၌လည်း တွေ့ရပါသည်။ ဤကား အရေးကြီးသော ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ရှင်မဿဲ၁၇း၁၉ç၂၁၌လည်း တွေ့ရပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်မာကု၉း၂၈-၂၉ အထိကို အသံကျယ်လောင်စွာဖြင့် ဖတ်ကြားကြပါစို့
“အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှ တပည့်တော်တို့က အကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနတ်ကို အဘယ်ကြောင့် မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟု တိတ်ဆိတ်စွာမေးလျှောက် ကြသော်၊ ကိုယ်တော်က ဆုတောင်းခြင်း၊အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး အဘယ် သို့သော်အားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည် မထွက်နိူင်ဟု မိန့်တော်မူ၏” ‘(ရှင်မာက ၉း၂၈ç၂၉)။
ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အကျယ်တဝင့်မရှင်းပြခင်၊ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်၏ အဆုံး၌ ဖေါ်ပြထား သောစကားလုံးကို ဖေါ်ပြပါမည် “ဆုတောင်းခြင်းကြွအြွစာရှောင်ခြင်း။ြွကမြွှတပါး အဘယ်သို့ သောအားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည်မထွက်နိုင်ဟူ၍ မိန့်ကြားထားပါသည်။ “အစာရှောင်ခြင်း” ဟူသောစကားလုံးကို NKJဠ နှင့်အခြား အနည်းငယ်သော ကျမ်းတို့၌သာ သုံးထားပြီး ကျန်သော ကျမ်းဘာသာပြန်စာအုပ်တို့၌ကား၊ ချန်လှပ်ထားခဲ့ကြသည်။ ဂျွန်မက်အာတာ ပြောကြားသည်မှာ “အစောပိုင်းကျမ်းစာလိပ်၌ နုတ်ကပတ်တော်ကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ကြ သည်။” (The MacArthur Study Bible; note on Mark 9:29).
ထိုသို့ချန်လှပ်ထားခဲ့ခြင်း အကြောင်းကား၊ ၎င်းစကားလုံးနှစ်ခု၌ အပြစ်အနာအဆာ အချို့ရှိ၍ဖြစ်၏။ ထိုနှစ်ခုအနက် တခုသည်၊ သိနာတောင် ကျမ်းလိတ်ဖြစ်ပြီး၊၎င်းကျမ်းကို သိနာတောင်ခြေရင်း၌ရှိ စိန့်ကတ်သရင်း၏ ဘုံဗိမာန်၌ တီးစ်ချန်ဒါ့ဖ်က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကျမ်းလိတ်ကို ဘာသာရေးအယူလွဲမှားသော ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက မိတ္တူကူးယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုဘုန်းတော်ကြီးသည် လူသားခန္တာကိုယ်အကြောင်းနှင့် နတ်ဝိညာဉ်ဆိုးများအကြောင်း စိတ်ဝင်စားလေ့လာသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သိနာတောင် ကျမ်းလိတ်၌ “အစာရှောင်ခြင်း”ဟူသော နုတ်ကပတ်တော်ကို ချဉ်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ထိုကျမ်းလိတ်သည် ၁၈၈၁ခုနှစ် Revised Version ထုတ်ဝေခြင်းမရှိသေးခင်၌ ဩဇာလွှမ်းထားခြင်းမရှိလှပေ။ Revised Version ကျမ်း၌ “အစာရှောင်ခြင်း”ဟူသော နုတ်ကပတ်တော်ကို ချန်လုပ်ထားခဲ့ကြသည်။ (၁၈၇၁ခုနှစ်ဂျေ၊အန်ဒါဘီ၊ ဘာသာပြန်၌ လည်း၊ အစာရှောင်ခြင်းကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ကြသည်။ (၁၉၁၃)ဂျွမ်းမိုဖက်ဖ်၏ ဘာသာပြန် ၌လည်း ၎င်းစကားလုံးကို မဖေါ်ပြခဲ့ပါ၊ New King James Version ၌လည်း ထိုအစာ ရှောင်ခြင်းဟူသော စကားလုံးကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ကြသည်။ Iဠဏ အနက်ပြန်စာအုပ်၌လည်း ၎င်းစကားလုံးကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ကြပါသည်။
“အစာရှောင်ခြင်း”ဟူသော စကားလုံးကို ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင် မိန့်မြွတ် တော်မူခဲ့ကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားငါးချက်ကို ထောက်ပြပါမည်။ (၁)အစကနဦးကတည်းက ဘာသာရေးအယူအလွဲသူတို့က လွှမ်းမိုးထား၍ဖြစ်ပါသည်။ (၂)ထိုအချိန်အခါ၌ ရာနှင့်ချီသော ကျမ်းမူရင်းတို့၌လည်း၊ “အစာရှောင်ခြင်း”ဟူသော နုတ်ကပတ်တော်ရှိခဲ့ပါသည်။ (၃)တရုတ်နိုင်ငံ၌ရှိ၊ သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာလင်းတို့ ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များက အစာမရှောင်ဘဲ နုတ်ဆိုးများကို မနှင်ထုတ်နိုင်ကြောင်းကို သိကြ၏။ ထိုကဲ့သို့ ဒေါက်တာလင်း ပြောနေကျစကားကို ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်သာ နတ်ဝိညာဉ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်နိုင်သည်ကို ထိုဆရာတို့၏ အတွ့အကြုံတို့ဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။ အစာရှောင်ခြင်းကို မကျင့်သုံးတော့ သော၊ အနောက်နိုင်ငံ၌ရှိ အသင်းတော်အများတို့သည် အားနည်းယိုယွင်းလာကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ “အစာရှောင်ခြင်း”ကို လက်တွေ့မကျင့်သုံးသောကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ကျဆင်းရခြင်းဖြစ်သည်။ “အစာရှောင်ခြင်း”ကို မကျင့်သုံးသောကြောင့်၊ အနောက်နိုင်ငံ အသင်းတော်များ၌ ဝိညာဉ်နိုးကြားခြင်းမရှိတော့ပေ။ “ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောသူ၏ အခြေအနေတရပ်သည် ဝိညာဉ်ရေးရာကျဆင်းခြင်းနှင့် တန်းခိုးမဲ့ခြင်းကိုသာ တွေ့ရပါသည်”ဟူ၍ ဒေါက်တာမီရီလ်အက်ဖ်အန်ဂါက သီကုံးရေးသားခဲ့ပါသည်။ (Unger, ibid.). စာတန်မာန် နတ်နှင့်သူ့အပေါင်းအပါတို့အား အမြဲသတိနှင့် စောင့်ကြပ် နေသော တရုတ်နိုင်ငံ၌ရှိ အသင်းတော်တို့သည် လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာကြပြီး၊ အနောက်နိုင်ငံ၌ရှိ အသင်းတော်များတို့ကား၊ ဝိညာဉ်ရေးရာကျဆင်းခြင်း နှင့်ရင်ဆိုင်နေရ ပါသည်။
နောက်တချက်နံပါတ်(၅)အနေဖြင့်၊ ဘာသာရေးအယူလွဲမှား သူတို့ပြန်ဆိုသော ကျမ်းလိတ်တို့ကို စာတန်က ၁၉ရာစုနှစ်တိုင်အောင် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဆက်လက်၍ ထိုကျမ်းကို ခေတ်သစ်ဓမ္မပညာရှင်များထံ အရောက်ပို့ကာ၊ ယနေ့နောက် ဆုံးသောကာလတိုင်အောင် အသင်းတော်အသီးသီးတို့အား ဝိညာဉ်ရေးရာကျဆင်းစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်သစ်ဓမ္မပညာရှင်များကိုလည်း စာတန်မာန်နတ်က ထိန်းချုပ်ထား ဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာလင်း ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “စာတန်မာန်နတ်ကို လှစ်လှူရှု ထားခြင်း၏ ရလဒ်သည်ကား ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်နာကျင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။” (Lin, ibid.). ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၎င်းကျမ်းစာတော်က ကျွန်ုပ်တို့အား ကနဦးနုတ်ကပတ်တော် ဆီသို့ပြန်လည်ပို့ ဆောင်ပေးပါသည်။
“အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှ တပည့်တော်တို့က၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနတ်ကို အဘယ်ကြောင့် မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟု တိတ်ဆိတ်စွာ မေးလျှောက် ကြသော်၊ ကိုယ်တော်က ဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါး၊အဘယ် သို့သောအားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည် မထွက်နိုင်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ရှင်မာကု ၉း၂၈ç၂၉)။
ဤကျမ်းပိုဒ်ထဲက အကြောင်းအရာနှစ်မျိုးကို လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်သည်။
၁။ပထမ၊ရညဘျစး စာတန်မာန်နတ်နှင့်အပေါင်းအပါတို့၌ ထူးခြားသော တန်းခိုးတော်များ ရှိပါသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်ရှိလာရခြင်းကား၊ နောက်လိုက်တပည့်တော်များက၊ နတ်ဆိုးစွဲသော လူငယ်ကို ပျောက်ကင်းအောင် မနှင်ထုတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလူငယ်၏ ဖခင်သည် နတ်ဆိုးစွဲသော၊ သူ့သားကို တပည့်တော်တို့၊ ရှေ့မှောက်၌ ခေါ်ဆောင် လာပါသည်။ လူငယ်သည် နုတ်ပူးခြင်းဖြစ်၍ ယေရှုနောက်လိုက်တို့က ၎င်းနတ်ဆိုးကို မနှင်ထုတ်နိုင်ကြပါ။ တပည့်တို့အား “နတ်ဆိုးများကို နှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်” တန်ခိုးကို ပေးအပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ (မဿဲ၁ဝး၈)။ ထို့ကြောင့် ဤလူငယ်နတ်ဆိုးပူးသောသူနှင့် မတွေ့ခင် အစောပိုင်းက နတ်ဆိုးများကို တခါတရံ တပည့်တော်များ နှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ ကြပါသည်။ သို့သော် ဤလူငယ်၌ရှိသော နတ်ဆိုးကိုမူကား တပည့်တော်များ မနှင်ထုတ်နိုင်ကြချေ။ ထိုလူငယ်၏ ဖခင်က ယေရှုအား “ထိုနတ်ကို နှင်ထုတ်မည့်အ ကြောင်း တပည့်တော်တို့အား အကျွန်ုပ်လျှောက်၍ သူတို့သည် မတတ်နိုင်ကြပါ”ဟု လျှောက်ခဲ့သည်။ (မာကု ၉း၁၈)။ ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းသော တပည့်တော်တို့အား ယေရှုသည် ဆုံးမတော်မူခဲ့သည်။ ပါးစပ်မှ အမြှပ်ထွက်ကျသော နုတ်ဆိုးပူးသူကို တပည့်တော်တို့သည် ယေရှုထံပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “နာပင်း၍ စကားအသောနတ်၊ သူငယ်မှထွက်လော့၊ နောက်တဖန်မဝင်နှင့် ငါ့အမိန့်ရှိ၏” (မာကု ၉း၂၅)ဟု ဆုံးမ၍ မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ထိုနတ်သည် အော်ဟစ်၍ အလွန်တောင့်မာစေပြီးမှ ထွက်သွား၏။ သူငယ်သည် သေသကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သေပြီဟု လူအများဆိုကြ၏။ ယေရှုသည် သူ၏လက်ကိုကိုင်၍ ချီ ရူအးကတော်မူသဖြင့် သူသည်ထလေ၏။ အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှ တပည့်တော်တို့က၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနတ်ကို အဘယ်ကြောင့် မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟု တိတ်ဆိတ် စွာမေးရှောက်ကြသော်၊
“ကိုယ်တော်က၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး၊ အဘယ်သို့ သောအားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည် မထွက်နိုင်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (မာကု၉း၂၉)
“အဘယ်သို့သောအားဖြင့်” ဟူ၍ ပြောဆိုခြင်းသည်၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် အစာရှောင်ခြင်း ကသာလျှင်၊ တတ်နိုင်တော်မူကြောင်း ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ ဝီလျံဟန်ဒရိတ် ဆန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “(ခရစ်တော်မိန့်ကြားခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤလောက၌ နတ်ဆိုး များစွာရှိပါသည်။ အချို့သော နတ်တို့မူကား တန်ခိုးရှိကြပြီး၊ သေစေလောက်၍ ပြင်းထန်သော နတ်ဆိုးများလည်း ရှိသည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်” (William Hendriksen, Th.D., New Testament Commentary: Exposition of the Gospel According to Mark, Baker Book House, 1973, p. 352; comment on Mark 9:29).
၁၉၇၀ခုနှစ်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂိုးဒင်းဂိတ်နှစ်ခြင်း၊ ဓမ္မတက္ကသိုလ်၌ ကျွန်ုပ်ဓမ္မပညာ သင်ကြးစဉ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးနှင့် စုပေါင်းကြပြီး၊ အသင်းတော်ကို ထူထောင်ခဲ့ကြပါသည်။ Hippie Movement လူမှုရေးစံ ကိုပယ်ချထား သူ၊ လူငယ်လှုပ်ရှားမှုမှ လူငယ်မောင်မယ်များထံသို့ ဧဝံဂေလိသတင်ကောင်း ဝေငှခဲ့ပါ သည်။ အခုဆိုလျှင်၊ ဆောက်သမ်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်ပင်ဖြစ်သည်။ များစွာသော မူးယစ် ဆေးဝါးစွဲသော လူငယ်များ၊ မှော်အတတ်ရှိ လူငယ်များပင်လျှင်၊ အသင်းတော်၌ ပါဝင်လာကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက်ပုံမှန် အစာရှောင် ဆုတောင်းကြပါသည်။ သို့သော် ထိုလူငယ်များ အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲ သူဟူ၍ မတွေ့ကြရပေ။
မီးလ်ဗီလေ၌ရှိ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ အမျိုးသမီးတဦးတက်ရောက် ခဲ့သည်ကို အမှတ်ရဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ သူဖြစ်သဖြင့် ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးသူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဒေသနာတော်ကို ကြားသောအခါ၊ သူသည် အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ နတ်ဆိုး၏ ချည်နှောင်ခြင်းမှလွှတ် မြောက် ခဲ့ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီး ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်လာသောအခါ၊ သူ့အမေက အိမ်မှနှင်ချခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ သူအိမ်ပြန်နိုင်ရန် သူ့၏မိခင်နှင့် ကျွန်ုပ်သွားတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်လည်းအဝတ်အစားလှဲပြီးနောက် မီရိန်းကောက်တီ၌ရှိ သူတို့အိမ်သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ တံခါးကို ခေါက်၍ သူ့အမေက ဝင်ခွင့်ပြု၍ ကျွန်ုပ်လည်း အိမ်ထဲသို့ ဝင်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ ကိုယ်မှအရက်နံ့ကိုလည်း ကြားရပါသည်။ သင်၏ သမီးငယ်ကို အိမ်သို့ပြန်ခေါ်လျှင်၊ ပိုကောင်းမည်ဟု ပြောပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့ ကျွန်ုပ်ပြောကြား သောအခါ၊ သူ၏ မျက်နှာကို ဝိညာဉ်ဆိုးများက ဝိုင်းကြည့်နေသည်ကို ကျွန်ုပ်မေ့မရပါ။ သူက ကျွန်ုပ်အား အမျက်ဒေါသနှင့် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “သူ့ကောင်လေးနှင့် ထွက်ပြေး သွားသည်ကို သည်းခံနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သူအရက်သေစာဆွဲ သောက်ခဲ့သည်ကိုလည်း သည်းခံနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အခုဆိုလျှင် ခရစ်ယာန် ဖြစ်နေပြီ၊ (စိတ်လိုက်မာန်ပါဖြင့် “ခရစ်ယာန်”ဟူ၍ ရက်စက်သောလေသံဖြင့် ပြောသည်) “အခုဆိုလျှင် သူမသည် ခရစ်ယာန် တဦးဖြစ်နေပြီ၊ ဒါကြောင့် သည်းမခံခွင့် မလွှတ်နိုင်ဘူး”! ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ သူသည်
ဘာသာရေးခွဲ ထွက်သူ၊ လူဖြူတစ်ဦးဖြစ်နေပါသည်။ သူသည် သူ့သမီးခရစ်ယာန်ဖြစ်၍ အားမပေးလို၊ အစွန်းမရောက်လို တိတ်ဆိတ်စွာ ကြားနေအမျိုးသမီးဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်လည်း ဘယ်နည်းနှင့်မျှ သမီးနှင့် သူ့ကြား၊ ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေး၍မရ ဖြစ်ပါသဖြင်၊ ၎င်းနေ အိမ်မှပြန်လာခဲ့ပါသည်။ သနားစရာ ကောင်းသော သမီးခဗျာ၊ သူမိသားစုနှင့် ဘယ်တော့မှ ပြန်နေ၍မရတော့ပါ။ ထိုအမျိုးသမီးသည် နောင်တွင် ခရစ်ယာန် အမျိုးသားတဦးနှင့် လက်ထပ်ပြီး နောက်၊ ဥရောပတိုက် ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၌ သာသနာပြုရန်သွားခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ကို စွန့်ခွါသွားပြီးနောက် သူကိုမတွေ့သည်မှာ အနှစ်သုံးဆယ်ပြည့်ပြီဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပတ်ခန့်က၊ ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့် သားလက်စလီတို့နှင့်အတူ မီရိန်းကောက်တီသို၊ မိုက်ရီလဲ၊ ရိုဂျဟောက်မန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့တည်ထောင်ခဲ့သော အသင်း တော်၊ အနှစ်လေးဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲသို့ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ထိုဝတ်ပြုအစည်း အဝေးပြီးသောအခါ၊ စင်မြင့်ပေါ်မှ အဆင်းတွင်၊ ထိုအမျိုးသမီးသည် မျက်ရည်စီးကျ လျက် ကျွန်ုfပ်အားလာနုတ်ဆက်ပါသည်။ သူ၏အမျိုးသားနှင့်လည်း မိတ်ဆက်ပေးပါ သည်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံသည် တဖါလုံနီးပါး၊ မိမိတို့ဘုရားကျောင်းနှင့် ဝေးသောနေရာ၊ ဗရိက်မြို့၊ ချက်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။ မျက်ရည် အတူစီးလျှက်၊ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခဲ့ကြပါသည်။ သူ့အမေအကြောင်းကိုလည်း မေမြန်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူ့အမေသည် အသက်ငါးဆယ်ပြည့်သောအခါ၊ အရက်သောက်စွဲရောဂါ ကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်းပြော ပြခဲ့ပါသည်။ တကယ့်ဝမ်းနည်းစရာပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုအမျိုးသမီးမူကား၊ စာတန်မာန်နတ်နှိပ်စက်ခြင်း၊ ကြောက်မက်ဖွယ်အသက်ရှင် ခြင်းထဲက၊ ယေရှုဘုရား၏ မစခြင်း၊ ကျေးဇူးကိုခံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်လာရန် ဆုတောင်းခြင်းနှင့် အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး၊ အခြားနည်းလမ်းမရှိနိုင်ပါ!
“ကိုယ်တော်က၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး၊ အဘယ်သို့သော အားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည် မထွက်နိုင်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (မာကု၉း၂၉)။
၂။ဒုတိယ၊ရညဘျစး အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းသည်၊ စာတန်မာန်နတ်၏တန်ခိုးတော်မှ သင့်အား ဘုရားသခင်ဖြေလွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဟေရှာယ၅၈း၈ကို ဖွင့်ထားကြစို့။ စကော့ဖီးလ်ကျမ်းစာ၌ စာမျက်နှာ ၇၆ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် ဖတ်ကြားကြပါစို့။
“ငါနှစ်သက်သော အစာရှောင်ခြင်းဟူမူကား၊ မတရားသော အချည်အ နှောင်ကို ချွတ်ခြင်း၊ လေးသောဝန်ကိုချခြင်း၊ ညှင်းဆဲခံရသူတို့ကို လွှတ်ခြင်း၊ ထမ်းပိုးရှိသမျှကို ချိုးခြင်းမဟုတ်လော့” (ဟေရှာယ၅၈း၆)။
သမ္မာကျမ်းစာမြတ်၏ မှန်ကန်သောခံယူချက်သည် ငြင်းပယ်ရန်မရှိအမြဲ မှန်ကန် နေပေမည်။ အကြောင်းအရာ အခြေအနေတရပ်ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း ၎င်းအခြေခံအမှန်တ ရားပေါ် တည်ဆောက်ဖို့လိုပါသည်။ အစာရှောင်ခြင်းအားဖြင့်သာ စာတန်၏ လက်တွင်း က၊ လူများတို့ကို ကယ်လွတ်နိုင်ခြင်းသည် မာကု၉း၂၉၌ သာတွေ့ရသည်မဟုတ်၊ ရှင်မဿဲ၁၇း၂၁၌လည်း တွေ့ရပါသည်။ ဘာသာရေးအယူလွဲစေသူ နှစ်ဦးတို့က ၎င်းကျမ်း မဿဲ၁၇း၂၁၌ပါ၊ နုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်း မှောက်လှန်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ပို၍ ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားသော ဟေရှာယ၅၈း၆ကိုမူကား၊ မှောက်လှန်ပစ်၍ မရနိုင်ပါ ထိုကျမ်းတော်မြတ်ကို၊ ရှင်မကု ၉း၂၉၌ ကိုးကားထားပါသည်။ ယေရှုဘုရားသည် ၎င်း ကျမ်းပိုဒ်၏ အမှန်တရားကို ကိုးကားပြီးမိန့်တော်မူသည်ကား “ကိုယ်တော်က၊ ဆုတောင်း ခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါး၊ အဘယ်သို့သောအားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည် မထွက်နိုင်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (မာကု၉း၂၉)။
“ငါနှစ်သက်သော အစာရှောင်ခြင်းဟူမူကား၊ မတရားသောအချည် နှောင်ကို ချွတ်ခြင်း၊ လေးသောဝန်ကိုချခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲခံရသူတို့ကို လွတ်ခြင်း၊ ထမ်းပိုးရှိသမျှတို့kdကို ချိုးခြင်းမဟုတ်လော့” (ဟေရှာယ၅၈း၆)။
ဘုရားသခင်သည် မြန်ဆန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သော်၎င်း၊ ဤနည်းလမ်း ကို ရွေးချယ်ပေးခဲ့သည်! ထိုသို့ အစာရှောင်ခြင်းသည် မတရားသော အချည်အနှောင်ကို ချွတ်ခြင်း၊ လေးသောဝန်ကိုချခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲခံရသူတို့ကို လွှတ်ခြင်းတို့ ပင်ဖြစ်ကြသည်! ၁၈ရာစု၌ ဧဝံဂေလိ တရားဟောဆရာကြီး ဂျွန်းဝီစလီသည် ထောင် ပေါင်းများစွာသော လူများအသက်တာပြောင်းလဲရန် ဘုရားသခင် အသုံးပြုခဲ့သူဖြစ်ပါ သည်။ ဂျွန်ဝီစလီပြော ကြားခဲ့သည်မှာ၊
“နေ့ရက်အစဉ်၊ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဝတ်ကိုပြုရန် ကြိုးစားပြီ လား? ထိုအခါ ကျေးဇူးပလ္လင်တော်မှသော်၎င်း၊ မစခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော် သည် စီးဆင်းလာမည်ဖြစ်သည်။”
ဂျွန်၏ ညီအစ်ကိုဖြစ်သော ချားလ်ဝီစလီက ၎င်း၏ဓမ္မသီချင်းစာအုပ်ထဲ၌ အောက်ပါ အတိုင်း သီကုံးရေးသားခဲ့ပါသည်။
(အို၊ ကိုယ်တော်အား ချီးမွမ်းကြ၊ ၁၇၀၇-၁၇၈၈ခုနှစ်၊ ချားလ်ဝီစလီ
အကယ်၍ သင်သည်လည်း စာတန်မာန်နတ်၏ ချည်နှောင်ခြင်းမှ လွှတ်မြောက်သူဖြစ်ပါ က၊ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက်အောက်ပါ ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့!
အာမင်၊ အာမင်! မိတ်ဆွေတို့ထိုနိုင်ပါပြီ။
ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းနည်းလည်းကို ဘုရားသခင်အသုံးပြုစေခြင်းသည် သေခြင်းတန်ခိုးမှသော်၎င်း၊ စာတန်၏ ချုပ်နှောင်ခြင်းမှသော်၎င်း၊ သင်လွှတ်မြောက်ဖို့ ဖြစ်ပါသည်! ဘုရားသခင်နာမတော် ဘုန်းကြီးပါစေ! ဟာလေလုယာ!
ထို့ကြောင့် လာမည့်အပတ်သောကြာနေ့ အစာရှောင်ဆုတောင်း အစည်းအဝေး၌ တတ်ရောက်ပါရန် ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုပါသည်။ မြောက်များစွာသော လူငယ်မောင်မယ်များ စာတန်မာန်နတ်၏ တန်ခိုးတော်မှ လွှတ်မြောက်ရန် ဆုတောင်းပေးပါမည်။ လဲကျနေ သော သူတို့ဘုရားကျောင်းကို တတ်ရောက်နိုင်ရန် ဆုတောင်းပေးပါသည်။ အကယ်၍ ဖြစ်နိုင်လျှင်၊ အစာလုံး၀မစားဘဲ၊ ရေကိုသာ သောက်သုံးလျှက်၊ သောကြာနေ့တနေ့လုံး အစာရှောင်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တဆက်တည်း ဘုရားကျောင်းတက်လို့ ရတာပေါဗျာ။ သောကြာနေ့ညတွင် အစာပြေကျွေးမွေးမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၌ ရောဂါတခုခုရှိ နေပါလျှင်၊ သင့်၏ဆေးဘက်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ လာရောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်း လိုပါသည်။ ရေကိုတော့ များများသောက်လာကြပါ၊ အကယ်၍ ကော်ဖီသော်၎င်း၊ လက်ဖက်ရည်သော်၎င်း၊ သောက်လေ့ရှိပါက သောက်၍လာကြပါ၊ အကယ်၍ မသောက်လိုက်ရ၍ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံရပြီး ဆုတောင်းပွဲ မပြီးပဲဖြစ်နေမည်။
လူသစ်များနှင့်အတူ အစာရှောင်ဆုတောင်းဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်၊ နာမည်လည်း ရေးမှတ်ထားပေးကြပါ၊ အကယ်၍ သင်သည် သောကြာနေ့တနေ့လုံး အလုပ်ပင်ပန်းသူဖြစ်ပါက၊ အဆာပြေခရမ်းချဉ်သီး၊ အရည်ကို တိုက်ကျွေးပါမည်။ လိုက်ဘာတီ ဂျူနီဗါစီတီကို တည်ထောင်သူ၊ ဒေါက်တာ ဂျေရီဖါဝေလ်၏ ပြောစကားကို အမှတ်ရကြပါ။
အကယ်၍ လူသစ်တွေအဖို့ အစာရှောင်ရာတွင်၊ တရက်ပဲရှောင်သင့်ပါ သည်။ ခရစ်တော်ယေရှု၌ ရင့်ကျက်သော သူတို့သည် အစာအဟာရကို မသုံးဆောင်ဘဲ၊ ဆုတောင်းရန်လိုပါသည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (Jerry Falwell, D.D., Fasting: What the Bible Teaches, Tyndale House Publishers, 1984 edition, p. 29).
အကယ်၍ လာမည့်အပတ်သောကြာနေ့၌၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအဖို့ အစာ ရှောင်(ဆုတောင်း)ခြင်း၌ မိတ်ဆွေပါဝင်လိုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ တရားပလ္လင်ဘက်ဆီသို့ ရူအးကလာကြပါ။ မစ္စတာဝီစတန်ဆောင်းက ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး ထိုင်နိုင်ကြပါပြီ။ “ကိုယ်တော်သည် စာတန်၏တန်ခိုးမှ” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပါသည်။
နောက်တခုကတော့- အကယ်၍ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသေးသူဖြစ် ပါက၊ ကျွန်ုပ်စကားကို ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးပါ။ ယေရှုသည် သင်၏ အပြစ်အဖိုး
အခဖြစ်သော သေခြင်းကို လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အသေခံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သင်အပြစ် ကို ဆေးကြောသန့်ရှင်းဖို့ရန် အသွေးတော်ကို သွန်းလောင်းခဲ့ပြီ။ သုံးရက်မြောက်နေ့တွင် ကိုယ်တော်သည် ခန္တာကိုယ်၊ အသွေးအသားအားဖြင့် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ် သည်။ ထမြောက်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ရူအးကတော်မူ ပြီးအဖခမည်းတော်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌ စံမြန်းတော်မူပြီး သင့်အဖို့အမြဲဆုတောင်း ပေးနေပါသည်။ မိတ်ဆွယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှုသခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ သင့်အပြစ် ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး ထာ၀ရအသက်ရှင် ခွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သခင်ထံ သင်တိုး ဝင်ချဉ်းကပ်နိုင်ပါစေသော! နောက်အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့၌လည်း ဤဘုရားကျောင်း၌ မိတ်ဆွေတို့၊ ကြိုးစားပြီး တက်ရောက်ပေးကြပါ။ အာမင်!
-တရားဒေသနာမတိုင်ခင်၊ မစ္စတာဂျူဒေါင်လီမှ ရှင်မာကု ၉း၂၀-၂၉အထိ ဖတ်ကြားပေး ပါသည်။
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်ဖ်မှ (1880- 1955
ခုနှစ်၊ ဟိုမားရိုဒီဟီးဗါး သီကုံးရေးသားသော “ယေရှုရူအးကလာတောမည်” ဟူသော
“အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှ တပည့်တော်တို့က၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနတ်ကိုအဘယ် ကြောင့်၊မနှင့်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟု တိတ်ဆိတ်စွာ မေးလျှောက်ကြသော်၊ ကိုယ် တော်က၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းမှတပါး အဘယ်သို့သောအားဖြင့် ထိုနတ်မျိုးသည်မထွက်နိုင်ဟု မိန့်တော်မူ၏’ ‘(မာကု ၉း၂၈ç၂၉)။
(၁တိမော ၄း၁၊ ဗျာဒိတ်၃း၁၇)
၁။ပထမ၊ရညဘျစး စာတန်မာန်နတ်နှင့် အပေါင်းအပါတို့၌ ထူးခြားသော ဘြွမ ။တြွပည့်တော် အများရှိ ပါသည်။ မဿဲ၁ဝး၈၊ ရှင်မာကု ၉း၁၈ç၂၅
၂။ဒုတိယ၊ရညဘျစး အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းသည်၊ စာတန်မာန်နတ်၏တန်ခိုးတော်မှ ဘြွမ ။ဩွင့်အား ဘုရားသခင်ဖြေလွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဟေရှာယ၅၈း၆